Musharax Guuleed;"Kiiska Badda waa dhaxal umadeed oo ka Madaxbanaan Siyaaasad iyo Caadifad gooni ah." - Jowhar somali news leader
Home NEWS Musharax Guuleed;”Kiiska Badda waa dhaxal umadeed oo ka Madaxbanaan Siyaaasad iyo Caadifad...
Musharax Guuleed;”Kiiska Badda waa dhaxal umadeed oo ka Madaxbanaan Siyaaasad iyo Caadifad gooni ah.”
Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlayay dacwada badda ayaa sheegay in ay tahay mid ka mid ah qadiyaddaha waaweyn ee dalkeena.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin labo wadan oo deris ah oo aan kala guuri karin, danno iyo masaalix aad u faro badanna ay ka dhaxeeyaan, kana dhaxeyn doonaan.
Qoraalka uu soo dhigey bartiisa Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa u qornaa sidan;
Kiiska baddu wuxuu ka mid yahay qadiyaddaha waaweyn ee dalkeenna. Waana dhaxal umaddeed oo ka madaxbanaan siyaaasad iyo caadifad gooni ah. Maanta waxey Soomaaliya u tahay maalin ay adduunka tuseyno una soo bandhigeyso dhab ahaanshaha dooddeena. Waxaan guul u rajeynaya kooxda Soomaaliya mataleysa ee ku sugan maxkamadda ICJ.
Soomaaliya iyo Kenya waa labo wadan oo daris ah, oo aan kala guuri karin, danno iyo masaalix aad u faro badanna ay ka dhaxeeyaan, kana dhaxeyn doonaan. Sida caadiga ahna dalalka dariska ah intooda badan waxaa dhexyaala qadiyado waaweyn oo taabanaya arimo dhuleed, badeed iyo daddeed intaba, laakiin taasi kama dhigna in la burburiyo xiriirka, darisnimada iyo wax wada qabsiga dalalka iyo shucuubta.
Inkastoo sida aan xogta ku heyno Kenya aysan maanta dhageysiga dacwada xaadiri doonin, hadana waxaan wali ku rajo weynahay in Somalia iyo Kenya ay wada ixtiraami doono xeerarka iyo shuruucda Caalamiga ah ee garnaqsiga, sidoo kalana ayna wanaajin doono dannihii caamka ahaa ee waqtiga dheer ka dhaxeeyay labada wadan.
Previous articleRohingya refugees fly to camps in India following deportation threats
Next articleMadaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo laga tallaalay cudurka Covid 19